Global Voices teny Malagasy » Sina: Nosakanana an-tserasera ny Lanonan-dohataonan’i Shanzhai · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Febroary 2009 9:21 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Lila
Sokajy: Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia, Zavakanto & Kolontsaina
Ny alin'ny 25 janoary 2009 dia nijanona tany an-tranony mankafy ny sakafo famaranana miandry ny taona vaovao araka ny fanisanandro manaraka ny volana ny ankamaroan'ny Sinoa any amin'ny tanibe. Mahazatra ny ankamaroan'ny mpianakavy rehefa alina tahaka izao ny mijery ny Lanonan-dohataona alefan'ny fahitalavitra CCTV. Tamin'ity taona ity dia misy ny fandaharana azo isafidianana saingy…
Mpiserasera iray antsoina hoe Lao Meng no nanam-pikasana hikarakara solona lanonan-dohataona an-tserasera nampitondrainy ny anarana hoe “Shanzhai Spring Gala” izay fampisehoana notontosaina tamin'ny volana novambra 2008. (Ny dikan'ny hoe Shanzhai dia trano fototry ny orinasa na tanàna an-tendrombohitra). Nandefa antso fandraisana anjara ho amin'izany izy ary nahazo mpandray anjara 35 be izao. Nokasaina halefa amin'ny internet amin'ny alalan'ny vohikala mpandray lahatsary (video) Tecent sy UUSee, ny fampisehoana , ny alin'ny 25 janoary. Kinanjo tamin'ny fiandohan'ny volana janoary ihany dia namoaka filazana tamin'ny fampahalalam-baovao rehetra ny Biraom-panjakana misahana ny Fampielezam-peo sy ny Fahitalavitra (SARFT) miangavy ny hanajanonana io lanonana atao hoe “Shanzhai Gala” io. Fanampin'izany dia nofoanana noho ny antony tsy fantatra avokoa ny famandrihana rehetra ka nahatery an'i Lao Meng nandrakitra ny fampisehoana ary namadika ilay “lanonana ho an'ny daholobe” ho fivoriana sy fiaraha-mifalin'ny samy mpinamana.
Noraketin'i (enregistrer) Lao Meng sy ny namany avokoa ny fampisehoan-talenta tamin'ny 22 janoary. Saingy tsy tafavoaka mihitsy ny sarimihetsika raha anaovana anaram-pamantarana (tag) hoe “Shanzhai Spring gala”. Na dia tsy notagena aza (nasiana anaram-pamantarana ) ireo rakitsary dia tratra eny antenantenam-pandefasana azy. Ny 2 febroary dia nisy mpanao gazety iray avy ao amin'ny Beijing News nilaza fa tsy nahita na dia rakitsary iray aza izy mikasika ny Lanonana Shanzhai tamin'ireo vohikala 56 fijerena lahatsary malaza indrindra any Sina. Nanamarika i lao Meng fa noraran'ny fanjakana ny fampisehoana noho ny antony tsy fankasitrahana ny Smut.
Iza àry no tompon'andraikitra tamin'ity fandrarana ity ? Gowers no nanondro :
Nahoana no tsy afaka mampiseho ny lanonana ireo vohikalan-dahatsary ireo ? Indrisy moa fa ny lehiben'izy ireny dia ao amin'ny SARFT sy ny sampan-draharahan'ny kolontsaina ihany. Avy amin'ny SARFT ny fahazoan-dàlana mandefa fandaharana, ary ny tranonkala rehetra dia tsy maintsy mahafantatra olona vao mahazo fahazoan-dalana. Noho izany raha vao miteny amin'izy ireo ny SARFT hoe “aza mandray anjara na manaparitaka” ny Shanzhai, iza no mbola sahy handefa izany ihany ? Fanampin'izany dia vao haingana ny sampan-draharahan'ny kolontsaina no naneho ny tsy fankasitrahany ny Smut, raha toa ka sokajiana ho vohikala tsy manam-pahamendrehana izay mandefa ny lanonana Shanzhai dia hovidiny lafo tokoa izany.
Ny foto-kevitra ijoroan'ity lanonana ity moa ny hoe ” Lanonana Lohataona ho an'ny vahoaka, avy amin'ny vahoaka”, ary ny mpandray anjara dia ireo mpiasa avy any ambanivohitra nifindra monina, mpianatra na ireo tany ampielezana tsy nahatratra ny fivoriam-pianakaviana. Soa ihany fa tsapan'ireo ao amin'ny CCTV sy ny departemantan'ny fampielezan-kevitra fa fanamby ho azy ity.
Ao amin'ny 163.com dia efa mihoatra ny 200 ny fanehoan-kevitra  momba ny gala ary ny ankamaroany dia fanakianana ny ampihimamban'ny CCTV. Ireto àry misy santionany vitsivitsy :
Misy firaisana tsikombakomba ao, nitady ny lanonana Shanzhai aho tamin'ny alin'ny faran'ny taona kanefa tsy afaka nidirana avokoa ny fifandraisana rehetra. Tsy rariny ny ataon'ny CCTV, tsy sahy miatrika ny fifaninanana izy kanefa mamingamingana any ambany latabatra. Farany moa dia araka izay efa nantenaina ny fampisehoan'ny CCTV, fitsentsefana !
Mampalahelo ny CCTV, mora hozongozonin'ny Shanzhai.
Raha ny firenena iray no tsy mankasitraka ny fandaharana amin'ny internet tahaka ny lanonana Shanzhai, dia efa manakaiky ny fiafarany izany firenena izany.
Tena CCTV, tena Sina
Afaka mijery ny Shanzhai Spring Festival Gala ianao ao amin'ny youtube  (saingy sarotra ny manavaka ny tena asan'i Lao Meng satria maro ny mampiasa ny tagy (anaram-pamantarana) Shanzhai mba hitadiavan-daza amin'ny sarimihetsika). Ho an'ny Sinoa any amin'ny tanibe moa dia afaka miditra amin'ny alalan'ny Proxy sy TOR izy ireo. Ity àry misy fampisehoana iray nataon'ny mpianatry ny Oniversiten'i Hong Kong, mampiasa ny Shanzhai ao amin'ny lohateniny :
Misy fampahafantarana bebe kokoa avy amin'ny DANWEI  sy hollywoodreporter .
Efa nivoaka tao amin'ny Globalvoices Advocacy nasiana fanovana ity lahatsoratra ity .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/06/1543/
 Gowers no nanondro: http://www.gowers.cn/blog/08465302031241.html
 mihoatra ny 200 ny fanehoan-kevitra: http://comment.news.163.com/news_guonei5_bbs/514LON3P0001124J.html
 Shanzhai Spring Festival Gala ianao ao amin'ny youtube: http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=%E5%B1%B1%E5%AF%A8%E6%98%A5%E6%99%9A&aq=f
 Globalvoices Advocacy nasiana fanovana ity lahatsoratra ity: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/02/05/shanzhai-spring-festival-gala-blocked-in-china